Hear Me (2009) Hear Me (2009)____IMDb - 7.5/10 အချစ်မှာ မျက်စိမပါဘူးလို့ဆိုကြပါတယ်။ တကယ်တော့ အချစ်မှာ နားလဲမပါဘူးဆိုတာ ဒီဇာတ်ကားမှာတွေ့ရပါမယ်။ အကြားအာရုံမပါဝင်ဘဲ ချစ်ခြင်းမေတ္တာတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လာပုံကို တင်ဆက်ထားပါတယ်။ ချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုဖွဲ့နွဲ့ကြတဲ့ဇာတ်ကားတွေထဲမှာ ဒီဇာတ်ကားကတော့ ပိုမိုထူးခြားပါတယ်။ အလွန်ပေါ့ပါးစွာ တင်ဆက်ထားပေမယ့် နက်နဲတဲ့ချစ်ခြင်းရဲ့ရသတွေကို ကြည့်နေရင်းခံစားရပါတယ်။ ဇာတ်ကားရဲ့အဆုံးသတ်စာသားလေးကလဲ ကြည်နူးဖွယ်ရာပါ။ " အချစ်နဲ့အိမ်မက်ကအံ့သြဖွယ်ကောင်းပါတယ်။ သူတို့တွေဟာ ကြားဖို့ရော စကားပြောဖို့ရော ဘာသာပြန်ပေးဖို့ရော မလိုအပ်ကြဘူး။" Drama, Romance အမျိုးအစား ထိုင်ဝမ်ဇာတ်ကားဖြစ်ပြီး IMDb Rating (7.5/10) ရရှိထားလို့ ကြည့်သင့်တဲ့ဇာတ်ကားကောင်းလေးတစ်ကားပါ။ (ဒီဇာတ်ကားကိုတော့ Phyo Thu Hein မှခံစားတင်ဆက်ထားပါတယ်။) File size...(804 MB) Quality...BR-Rip 720p Format...mp4 Duration....01:49:27 Subtitle....Myanmar Subtitle (Hardsub) Translator.....Phyo Thu Hein Encoder....Nyeinsaeya Aung
Ready or Not (2019) ချမ်းသာပြီး လျို့ဝှတ်တက်တဲ့ မိသားစု တစ်ခု ရှိတယ် သူတို့ဟာ ဂိမ်းမင်းမျိုးဆက် လို့ ခေါ်ခံရပြီး ဂိမ်းကစားနည်းတွေကို ထုတ်လုပ်သူတွေဖြစ်ပါတယ် သူတို့ရဲ့ ကြီးကျယ်ခန်းနားတဲ့ နန်းတော်လို စံအိမ်ကြီးမှာ နေပြီး မျက်နှာတွေကတော့ တစ်ခုခုကို အလိုမကျတဲ့သူတွေလိုပေါ့ အဲ့ဒီအိမ်ကြီးမှာ အငယ်ဆုံးသားဖြစ်သူ အဲလစ်ကတော့ တစ်နေ့မှာ ဂရေ့စ် ဆိုတဲ့ ကောင်မလေးကို လက်ထပ်ယူဖို့ အိမ်ကိုခေါ်လာခဲ့ပါတော့တယ် ဒီမိသားစု အကြောင်း ဘာမှ မသိပဲ မောင့် တစ်မျက်နှာ တစ်ရွာထင်ပြီး လိုက်လာခဲ့တဲ့ ဂရေ့စ် ကတော့ ဒီမိသားစု နဲ့ အသားကျသွားဖို့ လိုက်လျောညီထွေဖြစ်ဖို့ ကြိုးစားမယ်လို့ အဆုံးစွန်ထိ တွေးပြီးသားပါ အားလုံးအဆင်ပြေပြေ ဖြစ်ခဲ့ပါတယ် မင်္ဂလာဆောင်တဲ့ ညမှာပဲ ဒီမိသားစု ဟာ အစဉ်အလာ တစ်ခုကို ထိန်းသိမ်းထားပြိး ဂိမ်း တစ်ခုကို ကစားရမှာ ဖြစ်ပါတယ်... မိသားစု ထဲ လူအသစ်ဝင်လာရင် ဒီမိသားစု နဲ့ ထိုက်တန်လား ဆိုတာ ဆုံးဖြတ်ကြဖို့ အတွက် သတို့သမီးက ပုန်းရမှာ ဖြစ်ပြီး မိသားစု များက လိုက်ရှာရမှာပါ ဒီလို တူတူပုန်းတမ်း ကစားနည်းကို ...
Kung Fu Panda3(2016) Kung Fu Panda3(2016) IMDb - 7.1/10_______Rotten - 87% Kung Fu Panda ဆိုရင် မသိတဲ့လူမရှိသလောက်ပဲ ကမ္ဘာမှာအောင်မြင်ခဲ့တဲ့ဒီ Animation ကားလေးဟာ Movie လောကမှာသာမက Game လောကမှာရော ဒိတ်ဒိတ်ကြဲကိုအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ 1 နဲ့2ကို ကြည့်ရှုခဲ့ကြပြီး ဇာတ်လမ်းဆုံးသွားပြီထင်နေခဲ့တုန်းမှာပဲ 2015 ခုနှစ်ရဲ့ Movie review တွေမှာ စတင်ကြော်ငြာပါလာခဲ့တော့ အရမ်းကိုမျှော်လင့်ပျော်ရွှင်စောင့်စားခဲ့ရတယ်။ အခုတော့ ကျွန်တော်တို့အချိန် CM အချိန်ရောက်ခဲ့ပြီ။ ဒီဇာတ်ကားဟာ အရင်ကားတွေထက်ပိုအောင်မြင်ခဲ့ပြီး IMDb rating 7.1/10 ထိရရှိအောင်မြင်ခဲ့ပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကိုအနည်းငယ်ပဲပြောပြချင်ပါတယ်။ ပိုရဲ့ ဆရာဖိုးဖိုးလိပ် ရဲ့ တိုက်ဖော်တိုက်ဖက် ကိုင် ဟာ ဝိညာဉ်ကမ္ဘာက သိုင်းဆရာတွေအားလုံးရဲ့ စွမ်းအင်တွေကို သိမ်းပိုက်ပြီး လူ့ပြည်ကိုပြန်ဝင်ရောက်လာပါတယ်။ ပြီးတော့ လူ့ပြည်က ဆရာတွေအားလုံးရဲ့ စွမ်းအင် ချီ တွေကိုပါ သိမ်းပိုက်လိုက်ပါတယ်။ ဒါကို တားဆီးနိုင်ဖို့အတွက် ပို တစ်ယောက်လက်ရှိအင်အားနဲ့မဖြစ်နိုင်တော့ပါဘူး။ သူကိုယ်တိုင် ချီရဲ့ အရှင်သခင် ဖြစ်အောင်လုပ်ရပါတော့မယ်။ ဒီအဆင့်ကိုရောက်ဖို့ ဆရာလိပ်က နှစ် ၃၀ လောက် ...
Jagame Thandhiram(2021) Jagame Thandhiram(2021) အညွှန်း*******************************IMDb...7.0အခုတင်ဆက်ပေးမဲ့ဇာတ်ကားလေးကတော့ ၂၀၂၁ ခုနှစ်ထွက် အမိုက်စား အိန္ဒိယ Action/Drama ကားလေးပဲဖြစ်ပါတယ်....ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ ဇာတ်လိုက်မင်းသား ဆူရီလီ ဟာ အိန္ဒိယနိုင်ငံ တမေးလ်နာဒူ ဒေသကသာမာန်စားသောက်ဆိုင်တစ်ခုမှာ အလုပ်လုပ်တဲ့ လူငယ်တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်... ဒါ့အပြင် ကြံ့ခိုင်ထက်မြတ်တဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တဲ့ ဆူရီလီ ဟာ ဒေသတွင်းက ပြဿနာတွေကို အကြမ်းနည်းနဲ့ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းလေ့ရှိတဲ့အတွက် ဂိုဏ်းစတားတစ်ယောက်အဖြစ် နာမည်ကျော်ကြားတဲ့ သူလည်းဖြစ်ပါတယ် .... တစ်နေ့မှာတော့ ဗြိတိန်နိုင်ငံက နာမည်ကြီး ဂိုဏ်းတစ်ခုဟာ လန်ဒန်မှာ သောင်းကျန်းနေတဲ့….သူတို့ရဲ့ပြိုင်ဖက် အိန္ဒိယလူမျိုးဂိုဏ်းတစ်ခုကို ချေမှုန်းဖို့အတွက် ကူညီပေးဖို့ တမေးလ်နာဒူဒေသရဲ့ နာမည်ကျော် ဆူရီလီ ကို ကမ်းလှမ်းလာပါတော့တယ်...အဲ့ဒီနောက်ဘာတွေဆက်ဖြစ် ဆက်ကြမ်းမလဲဆိုတာကိုတော့.....ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်သူတွေကတော့ Thar Htet & Thaik San တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်...File Size :1.4GB Quality : WEB-DL 720p Format…mp4 Duration…02:37:00 Genre : Action, Comedy, Crime Subtitle : Myanmar Subtitle ...
Nobody(2021) Nobody(2021) အညွှန်း*******************IMDb...7.6(((BLU-RAY 1080P.5.1CH ထွက်လာလို့ Updateပေးထားပါတယ်.)ဒီကားကိုတော့ ဂျွန်ဝစ် lite လို့ ပြောရမလား pro max လို့ ပြောရမလား ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ကြည့်ပါတော့။ကြမ်းတာတော့ အတော်ကြမ်းပါတယ်။ ဘရုစ်ဝီလီရဲ့ Red လို ခံစားမှုမျိုးလည်းပါတယ်။ ဇာတ်လမ်းကတော့ ရှင်းပါတယ်။မန်ဆယ်လ်ဟာ စာလုံးသုံးလုံးပါတဲ့ အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ စာရင်းစစ် အငြိမ်းစားပါ။မိသားစုနဲ့ ကလေးနှစ်ယောက်နဲ့ အေးဆေးနေပါတယ်။ဒါပေမယ့် မိသားစုကို ညဘက် ဓားပြတိုက်ခံလိုက်ရတဲ့ကိစ္စနဲ့ ပတ်သတ်ပြီး ပြန်လိုက်ရှင်းရင်းနဲ့သမိုင်းပေးလူဆိုးတွေဖြစ်တဲ့ ရုရှားတွေနဲ့ သွားရှုပ်မိတဲ့အခါ... ချူချာတွေ ကံဆိုးရပါတော့တယ်...ဒီကားက သတ်ဖြတ်ခန်းတွေကြမ်းတဲ့အပြင် မင်းသားကြီး Bob Odenkirk ရဲ့အမိုက်စားသရုပ်ဆောင်ချက်တွေကြောင့်Box Office မှာလည်း တော်တော်ဝင်ငွေကောင်းတဲ့ကားကြီးဖြစ်ခဲ့တာမို့ အားလုံးပဲ လက်မလွှတ်သင့်ပါကြောင်းနင်းကန်သတင်းကောင်းပေးပါရစေ..... File Size : 856MB Quality : WEB-DL 720p Format…mp4 Duration…01:32:00 Genre : Action, Crime, Thriller Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Littleneo Encoded ...
Infinite(2021) Infinite(2021) အညွှန်း**********************သိပ္ပံစိတ်ကူးယဉ် အက်ရှင် ကောင်းတာလေး ကြည့်လို့ရအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။မင်းသားမင်းသမီးတွေကလည်း သိပြီးသားလူတွေပါပဲ။ဇာတ်လမ်းကတော့ လူဝင်စားအယူအဆတွေကို အခြေခံထားပါတယ်။ကမ္ဘာကြီးထဲက လူအချို့မှာအတိတ်ဘဝတွေအကုန်လုံးကို မှတ်မိနိုင်တဲ့ အစွမ်းပါလာတဲ့ လူတွေရှိနေပါတယ်။သူတို့ သင်ခဲ့သမျှ တတ်ခဲ့သမျှတွေကိုပါ မှတ်မိနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဘဝတွေ ကြာရှည်လာလေလ ပိုပြီး တော်လာလေလေပါပဲ။ဒီလို လူတွေထဲမှာမှ နှစ်မျိုးကွဲနေပါတယ်။ တစ်ဖွဲ့ကတော့ ဒီအစွမ်းနဲ့ အသိပညာတွေကို လူသားတွေကော်းဖို့ သုံးသင့်တယ်လို့ထင်တဲ့အဖွဲ့ပါ။နောက်တစ်ဖွဲ့ကတော့ ဒီလိုတွေ ပြန်ဝင်စားနေရတာဟာ ဆင်းရဲဒုက္ခမို့ ဒီဘဝကနေ လွတ်မြောက်ဖို့ အတွက် ကြိုးစားမယ့်အဖွဲ့ပါ။သူတို့ ကြိုးစားတာကတော့ ရိုးရှင်းပါတယ်။ ပြန်ဝင်စားစရာမရှိအောင် သက်ရှိတွေ တစ်ယောက်မကျန်သတ်လိုက်ရင် သံသရာအေးသွားမယ်ဆိုတာပါပဲ။ အဲဒီလို နှစ်ဖွဲ့ နှစ်ပေါင်းများစွာ အားပြိုင်လာရင်းနဲ့တစ်နေ့မှာ သူ့ကိုယ်သူ လူဝင်စားမှန်းမသိဘဲ စိတ်ရောဂါရှိနေတယ်ထင်လို့ ပြဿနာတွေတက်နေတဲ့ မင်းသားကိုတွေ့သွားတဲ့အခါ အဲဒီမင်းသားက သူတို့ ...
Tom Clancy’s Without Remorse (2021) Without Remorse (2021)အက်ရှင်ရော ဇာတ်လမ်းရော အတော်ကိုလန်းတဲ့ ရုပ်ရှင်တစ်ကားလောက် တင်ပေးထားပါတယ်။ဂျွန် ကယ်လီဟာ နေဗီဆီးလ် အထူးတပ်ဖွဲ့ ခေါင်းဆောင်တစ်ယောက်ပါ။ သူတို့ရဲ့ စစ်ဆင်ရေးတစ်ခုအပြီး အနားယူနေချိန်မှာ အဖွဲ့သားတွေအကုန်လုပ်ကြံခံရသလို၊ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ဝန်နဲ့ ဇနီးပါ သေသွားခဲ့ပါတယ်။ဒါကို လိုက်စုံစမ်းရင်းနဲ့ နိုင်ငံရေးအရှုပ်အထွေးနဲ့ သူလျိုတွေကြား ညပ်နေတာကို သိလာတဲ့အခါ ......File size… 2.45 GB and 1.15 GB Quality…. 1080p HEVC 5.1 CH and 720p Format…mp4 Duration…. 1h 49 min Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Translator ..... Little Neo Encoder ..... August
22 vs. Earth 22 vs Earth (2021)ဒါကတော့ Soul Animation Movie ထဲက 22 ရဲ့ Short Film ဇာတ်လမ်းတိုလေးပဲ ဖြစ်ပါတယ်။22 တစ်ယောက် ကမ္ဘာဂြိုလ်ကို မကျေနပ်တာနဲ့ ကမ္ဘာဂြိုလ်ဆီကို ပြန်မယ့် ဝိဉာဉ်တွေကို တားဆီးဖို့ရာ ကြိုးစားတဲ့အကြောင်း ဇာတ်လမ်းတို ရိုက်ကူးထားတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။22 ကို ချစ်ကြတဲ့သူတွေ ကြည့်ရှုခံစားနိုင်ဖို့ Channelmyamar မှ စီစဉ်တင်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်။File size… 121 MB Quality….1080p HEVC 5.1CH Format…mp4 Duration….9min Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Translator ..... August Encoder ..... August
Mumbai Saga (2021) Mumbai Saga (2021) မြန်မာစာတန်းထိုးဂျွန်အေဗရာဟမ် ၊ ကာဂျဲလ် ၊ အီမ်ရန်းတို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ ဘောလိဝုဒ်ကားလေးထွက်လာလို့ အခက်အခဲတွေကြားက မရရအောင် တင်ပေးလိုက်ပါတယ်။1980 ခုနှစ်နောက်ပိုင်း ဘုံဘေမြို့ ( ယခု မွန်ဘိုင်း) ကို အခြေတည် ရိုက်ကူးထားတဲ့ ဒီရုပ်ရှင်ဟာ ဖြစ်ရပ်မှန်ရဲ့ တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းကို မှီငြမ်းထားတယ်လို့ သိရပြီး ၊ အဲ့ဒီခေတ် အဲ့ဒီအခါ ဂိုဏ်းစတားတွေ ကြီးစိုးတဲ့ အချိန် ၊ နိုင်ငံရေးအရှုပ်အထွေးတွေကို နောက်ခံထားပြီး ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဘာသာပြန် နဲ့ အညွှန်းကတော့ Myint Thu ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။Encoder - AugustFile size… 3.7 GB and 1.3 GB Quality…. 1080p HEVC 5.1 and 720p Format…mp4 Duration…. 2h 15min Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Translator ..... Myint Thu Encoder ..... August
Judas and the Black Messiah(2021) Judas and the Black Messiah(2021)အညွှန်း*************************************IMDb...7.8"ကျုပ်တို့က မီးကိုမီးနဲ့မတိုက်ဘူး...မီးကိုရေနဲ့ငြိမ်းမှာ...ကျူပ်တို့က လူမျိုးရေးခွဲခြားခြင်းကိုလူမျိုးရေးခွဲခြားခြင်းနဲ့တိုက်နေတာမဟုတ်ဘူး....ကျုပ်တို့က စည်းလုံးခြင်းနဲ့တိုက်နေတာ...အရင်းရှင်ဝါဒကိုဆိုရှယ်လစ်ဝါဒနဲ့တိုက်မှာ"ဒါကတော့ လူမည်းတွေရဲအဆင့်အတန်းအားလုံးကိုမြင့်စေဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ ကျားသစ်နက်ပါတီရဲ့ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်သူ ဖရဒ်ဟမ်တွန်ရဲ့ မူဝါဒဖြစ်တယ်...သူ့ရဲ့တက်ကြွမှုတွေနဲ့ လူထုရဲ့ပါဝင်မှုတွေဟာ အစိုးရပိုင်းအတွက်တော့မျက်စိစပါးမွှေးစူးစရာပဲ...ခေါင်းဆောင်ြဖစ်တဲ့ ဖရဒ်ဟာ ကိုယ်စွမ်းဉာဏ်စွမ်းရှိသလို သူ့လှုပ်ရှားမှုတွေဟာလည်း အကြမ်းမဖက်တဲ့ဝါဒဖြစ်လေတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းကြီးကို နှိမ်နှင်းဖို့ ခက်ခဲနေပါတယ်..တဖြည်းဖြည်းအင်အင်းကြီးလာသလိုသူတို့စွဲကိုင်တဲ့တော်လှန်ရေးဝါဒကလည်း အင်အားဖြစ်စရာမို့ FBI က စနစ်တကျဖြိုခွင်းဖို့ကြိုးစားပါတယ်...ဒါ့ကြောင့် FBI ဟာ ကျားသစ်နက်ပါတီကိုဖြိုခွင်းဖို့ FBI အေးဂျင့် ရွိုင်မစ်ချယ် လူမည်းတစ်ယောက်ကိုသူလျှိုအဖြစ်ထည့်သွင်းလှုပ်ရှားစေခဲ့တယ်...ဒီလူမဲကတော့ သူ့ကိုယ်ကျိုးအတွက်ဘာမဆိုလုပ်မဲ့သူဖြစ်တယ်..အဲ့ဒီနောက်ဘာတွေဆက်ဖြစ်မလဲဆိုတာကိုတော့...ဒီကားက Biography ဖြစ်တဲ့အပြင် လူမဲအရေးလှုပ်ရှားမှုဇာတ်ကားဆိုပေမဲ့ အစမှ အဆုံးထိ စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းပါတယ်...ဆုကြီးပေါင်း (၈)ဆုရထားသလို IMDB ရော Rotten ရော အလန်းဆုံးအဆင့်မှာရှိလို့ လက်မလွှတ်စေလိုကြောင်း ပြောကြားပါရစေ..ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်သူကတော့ Lwin Lwin Aung ပဲဖြစ်ပါတယ်...File Size : (2.5 GB) and (1 GB) Quality : HEVC ...
The Father(2020) The Father(2020)အညွှန်း*************************IMDb Rating - 8.3/10Rotten Tomatoes - 98%လောကမှာ "အို/နာ/သေ" ဘေး တွေဆိုတာ လူတိုင်းလူတိုင်း ရှောင်လွှဲလို့မရတဲ့ နိယာမတရားတွေပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့ဒီအထဲမှာမှ မသေခင်စပ်ကြား အိုမင်းမစွမ်းကာလကိုတော့ အဆိုးရွားဆုံးအချိန် လို့တောင် သတ်မှတ်လို့ရမယ်ထင်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားမှာလည်း အန်တိုနီယို ဟာ အသက်အရွယ် အိုမင်းလာတဲ့အခါ ကြုံတွေ့ရတဲ့ အလားတူ လောကဒဏ်တွေကိုအလူးအလဲခံနေရတဲ့ သူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်။မှတ်ဉာဏ်တွေ လျော့နည်းလာတဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူကို တစ်ယောက်ထဲထားဖို့ စိတ်မချတဲ့အခါ သမီးဖြစ်သူ "အန်" ဟာဖခင်အတွက် ကိုယ်စားစောင့်ရှောက်ပေးမဲ့ သူတွေကို ငှားရမ်းဖို့ကြိုးပမ်းပါတော့တယ်။ဒီဇာတ်လမ်းဟာ "ငါမအိုသေး" ဆိုတဲ့ ဆောင်ပုဒ်ကို လက်ကိုင်ထားတဲ့ ဖခင်ဖြစ်သူ နဲ့ အစိုးရိမ်လွန်တတ်တဲ့ သမီးဖြစ်သူတို့ကြားက အားပြိုင်မှုတွေကို… လူ့သဘာဝ စရိုက်တွေ မပျောက်စေဘဲ ဂရုတစိုက် ဖန်တီးထားတဲ့ လက်ရာတစ်ခုဖြစ်တဲ့အပြင် ... ကြည့်ရှုသူ ပရိတ်သတ်ကို အတွေးပေါင်းများစွာပေးနိုင်မဲ့ နာမည်ကျော်ဒါရိုက်တာ Florian ...
Mortal Kombat (2021) Mortal Kombat (2021)ဒီရုပ်ရှင်ကိုလည်း အားလုံးမျှော်နေကြမယ်ထင်တယ်။အိုကြီးအိုမတိုင်းရဲ့ ငယ်ဘဝမှာ မော်တယ်ကွန်ဘက်ဂိမ်းကို အနည်းနဲ့အများ ရင်းနှီးဖူးကြမှာပဲ။အခုလည်း ဒီဂိမ်းကိုပဲ ရုပ်ရှင်အဖြစ် အသက်သွင်းလိုက်ပြန်ပါပြီ။အားလုံးသိကြတဲ့အတိုင်း ကမ္ဘာလောကအပြင် ငရဲကမ္ဘာ အခြားကမ္ဘာတွေက လက်ရွေးစင်တွေဟာ ပြိုင်ပွဲကြိးတစ်ပွဲမှာ ရင်ဆိုင်ကြလေ့ရှိပါတယ်။ကမ္ဘာလောကရဲ့ အဓိက ပြိုင်ဘက်ကတော့ Outworld ပေါ့။ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့ Outworld က Earth ကို ၉ ကြိမ်တောင် နိုင်ခဲ့ပြီးပါပြီ။ ၁၀ ကြိမ်အနိုင်ရခဲ့ရင် ကမ္ဘာကို အပိုင်စားရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကမ္ဘာရဲ့ လက်ရွေးစင်တွေက ဒီပွဲကို အနိုင်ယူဖို့ ဘယ်လိုတွေရင်ဆိုင်ရမလဲ ဆိုတာ တွေ့ရမှာပါ။File size… 1.15 GB and 3.19 GB Quality…. 720p and 1080p HEVC 5.1CH Format…mp4 Duration…. 1h 50min Subtitle….Myanmar Subtitle (Hardsub) Translator ..... Little Neo Encoder ..... August
The Marksman(2021) The Marksman(2021)အညွှန်း**************************((1080P ရပြီဗျို့)မက္ကဆီကို နယ်စပ်မှာ အထီးကျန်နေတဲ့ မရိန်းလက်ဖြောင့်တပ်သားဟောင်းကြီးတစ်ယောက်ရှိတယ်...ဝီစကီလေးမော့လိုက် ကားလေးမောင်းလိုက်နဲ့ပေါ့... တစ်နေ့မှာ မက္ကဆီကိုထဲက ခိုးဝင်လာတဲ့ သားအမိနှစ်ယောက် ရောက်လာတယ်.... သူတို့သားအမိကို မက္ကဆီရဲ့ ကြမ်းပေ့ဆိုတဲ့ လူဆိုးဂိုဏ်းက သတ်ဖို့လိုက်လာတယ်။ ဒီသားအမိဟာ ကံကောင်းထောက်မစွာ မရိန်းလက်ဖြောင့်တပ်သားဟောင်းကြီးနဲ့ဆုံဖြစ်ခဲ့တယ်....မက္ကဆီဂိုဏ်းက ဒီသားအမိကို မဖြစ်မနေသတ်ဖို့ ကိစ္စကြီးတစ်ခုရှိလာတဲ့အခါမှာတော့.......မင်းသားကြီး Liam Neeson ရဲ့ သဲထိတ်ရင်ဖို အက်ရှင်ခန်းတွေကို ခံစားကြည့်ကြပါဉီး..ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်သူကတော့ Littleneoပဲဖြစ်ပါတယ်..... File Size :1GB Quality : WEB-DL 720p Format…mp4 Duration…01:48:00 Genre : Action, Thriller Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Littleneo Encoded by Phyo Pyae
Chaos Walking(2021) Chaos Walking(2021)အညွှန်း**************************မင်းသားကတော့ တွမ်ဟော်လန်ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားတဲ့ သိပ္ပံစွန့်စားခန်း ရုပ်ရှင်ကားကြီးဖြစ်ပါတယ်....။ တော့ဒ် ဟီးဝစ်ဟာ ကမ္ဘာသစ်မှာ အခြေချနေတဲ့ လူသားတွေထဲက အငယ်ဆုံး ကောင်လေးတစ်ယောက်ပါ။အဲဒီ ကမ္ဘာသစ်ရဲ့ ထူးခြားချက်က လူတွေရဲ့ အတွေးတွေက အသံတွေပုံရိပ်တွေအဖြစ် ခေါင်းထဲက ထွက်ပေါ်နေတာပါပဲ။ဒီတော့ တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် လိမ်ဖို့ အတော်ခက်ပါတယ်။ပြီးတော့ နောက်ထပ်ထူးခြားတာက မိန်းမ တစ်ယောက်မှ မရှိတော့တာပါ။အဲဒီဂြိုလ်ရဲ့ စပက်ကယ်ဆိုတဲ့ ဂြိုလ်သားတွေက မိန်းမတွေအားလုံးကို သတ်ဖြတ်ခဲ့လို့ပါပဲ။တစ်နေ့မှာတော့ လူသားတွေပါတဲ့ ယာဉ်တစ်ခု အဲဒီဂြိုလ်ပေါ် ပျက်ကျလာပြီး မိန်းမတစ်ယောက် အသက်ရှင်ကျန်နေခဲ့တဲ့အခါ.....ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်သူတော့ Littleneo ပဲဖြစ်ပါတယ်.... File Size : (2.1GB) and (936MB) Quality : HEVC5.1CH,WEB-DL720p Format…mp4 Duration…01:30:00 Genre : Adventure, Sci-Fi Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Littleneo Encoded by Phyo Pyae
Enforcement(2021) Enforcement(2021)IMDb...7.0Svalegardenဆိုတဲ့ မြို့လေးမှာ အဓိကရုဏ်းဖြစ်ပွားနေလို့ ရဲတွေသွားနှိမ်နင်းကြတဲ့အချိန် လက်လွန်ပြီးတော့Talib Ben Hassiဆိုတဲ့သူကို သေလုနီးပါးဖြစ်စေခဲ့ပါတယ်။အဲဒီ့လူကို ရဲတွေပဲခေါ်သွားပြီး ဆေးရုံမှာ အရေးပေါ်ကုသပေးထားပါတယ်။တစ်ရက်တော့ အဲဒီမြို့လေးမှာ ကင်းလှည့်ဖို့ ရဲနှစ်ယောက်ဆီတာဝန်ကျလာခဲ့ပါတယ်။အခြေအနေတွေမတည်ငြိမ်လို့ မြန်မြန်ကင်းလှည့်ပြီးပြန်ထွက်ကြဖို့ ညွှန်ကြားချက်ရထားပေမယ့်စိတ်ဆတ်လွယ်တဲ့ရဲကတော့ မြို့ခံလူငယ်လေးတစ်ယောက်ကို တိကျတဲ့အကြောင်းရင်းမရှိဘဲ ဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားပါတယ်။ရဲနှစ်ယောက် အဲ့လူငယ်လေးကိုခေါ်ပြီး မြို့ထဲကထွက်ဖို့လုပ်နေကြတဲ့အချိန်မှာပဲTalib Ben Hassi သေဆုံးသွားကြောင်းကြားသိလိုက်ရပါတယ်။ဒီသတင်းဟာ မြို့ခံလူတွေကိုဒေါသထွက်စေခဲ့ပြီး သူတို့နယ်မြေထဲရောက်နေတဲ့ ရဲနှစ်ယောက်အပေါ် ဒေါသတွေပုံချလိုက်တဲ့အခါမှာတော့...ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်သူတွေကတော့ Khine Khine Wai & Ei Phyu Khin တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်....File Size : (2.08GB) and (920 MB) Quality : 1080P.HEVC, WEB-DL 720p Format…mp4 Duration…01:48:00 Genre : Action, Crime Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Khine Khine Wai & Ei Phyu Khin Encoded ...
The Vault(2021) The Vault(2021)အညွှန်း*********************IMDb...7.0Thomဆိုတဲ့ကောင်လေးက Cambridgeတက္ကသိုလ်ကအရမ်းတော်တဲ့ အင်ဂျင်နီယာကျောင်းသားတစ်ယောက်ပါ....ဉာဏ်ပြေးတဲ့Thomကို လစာဒေါ်လာသိန်းချီပြီးကမ်းလှမ်းတဲ့ကုမ္ပဏီကြီးတွေရှိခဲ့ပေမဲ့Thomကတော့ Walter Morelandရဲ့ကမ်းလှမ်းမှုကိုသာ စိတ်ဝင်စားခဲ့ပါတယ်....Walter Morelandတို့အဖွဲ့က နှစ်တရာကျော်သက်တမ်းရှိတဲ့စပိန်ဘဏ်အဆောက်အဦးကမြေအောက်ဘဏ္ဍာတိုက်တစ်ခုကိုဖွင့်ဖို့ ကြိုးစားနေတာပါ.....အဲ့ဒီစပိန်ဘဏ်က ကမ္ဘာ့အလုံခြုံဆုံးစနစ်နဲ့တည်ဆောက်ထားတဲ့ဘဏ်တွေထဲကတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်ပြီးထိုးဖောက်မရနိုင်တဲ့ အံ့မခန်းအင်ဂျင်နီယာအစွမ်းလို့ ပြောစမှတ်တွင်ပါတယ်.....လိုအပ်နေတဲ့ အင်ဂျင်နီယာဉာဏ်ကြီးရှင်Thomက Walterတို့အဖွဲ့ထဲရောက်လာတဲ့အချိန်မှာတော့ပျောက်ဆုံးနေတဲ့ရတနာသိုက်ကိုအရယူဖို့အတွက် ဘဏ္ဍာတိုက်ဖောက်ဖို့အစီအစဉ်ဆွဲကြပါတယ်....လုံခြုံရေးအထပ်ထပ်ကာထားတဲ့ဘဏ်ကို သူတို့ဘယ်လိုကြိုးစားပမ်းစားဖောက်ကြမလဲဆိုတာကိုတော့...ဒီကားက ထင်မထားလောက်အောက် နင်းကန်လန်းပါတယ်...ဒါ့ကြောင့်မို့ လက်မလွှတ်သင့်ပါကြောင်း သတင်းကောင်းပါးပါရစေ...ဇာတ်လမ်းအညွှန်းနဲ့ဘာသာပြန်သူကတွေကတော့ Khine Khine Wai & Ei Phyu Khin တို့ပဲဖြစ်ပါတယ်.... File Size : (2.2GB) and (0.9GB) Quality : HEVC 1080p 5.1,WEB-DL720p Format…mp4 Duration…01:30:00 Genre : Action, Adventure, Thriller Subtitle : Myanmar Subtitle (Hard Sub) Translated by Khine Khine Wai & Ei Phyu Khin Encoded by Phyo Pyae